Raràn’i India ny TikTok an’i Shina fa “manimba kolontsaina sy mandrisika pôrnôgrafia” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2019 14:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, 繁體中文, Ελληνικά, Español, Italiano, English
Mashup avy amin'ny sary tao amin'ny Wikimedia Commons. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Ao anatin'ny fihenjanana mandritra ny fotoam-pifidianana eto India, nisy didy iray nivoaka avy ao amin'ny fitsarana iray ao amin'ny fanjakana ao atsimo atsinanana ao amin'ny fanjakana Tamil Nadu mandrara ny olona mba tsy hitroka ny TikTok, fampiasa iray fifampizarana lahatsary miorina ao Shina.
Nolazain'ny didim-pitsarana fa mamela “fanimbàna ara-kolontsaina sy pornografia” ny TikTok sady notononiny fa mametraka ny fiainany antakonana ho tandindonin-doza ireo tanora misera eo amin'ny sehatra. Nitarin'ny didyhihatra amin'ny sehatra media ihany koa ny didy, mandrara ny fampiasana ny Tiktok rehefa manangom-baovao ry zareo.
Taoriana kelin'izany tamin'ny 16 avrily, Nodidian'ny minisiteran'ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisandavitra ao India ny Apple sy ny Google hanaisotra ny TikTok hiala ao amin'ny botikan'ny fampiasa. Nankatoa ireo orinasa ireo, ka niteraka fisavoritahana teo amin'ny mpisera izany.
Nihaika ny didy ny orinasa shinoa ByteDance akaiky ny TikTok, izay nivelatra haingana dia haingana tao India. Tao amin'ny fanambaràna iray momba ny didy, niteny ny TikTok :
Matoky ny rafi-pitsarana indiana izahay ary mitraka tsara amin'ny vokatra izay horaisin'ny mpisera mavitrika eto India mihoatra ny 120 tapitrisa tsara.
Mandritra izany fotoana izany mbola afa-mampiasa tsara ny TikTok ny mpisera 120 tapitrisa, satria ny fitrohana ny fampiasa ihany no voarara.
Inona ny lazain'ny olona amin'ny fandraràna?
Niteraka ahiahim-bahoaka ity fampiasa izay malaza eo amin'ny tanora ity tamin'ny oktobra 2018 rehefa nisy tanoravavy iray namono tena tao amin'ny lahatsary TikTok iray, tao Tamil Nadu. Vao niatrika fanohintohinana antserasera henjana ity tovovavy ity.
Voakiana ihany koa ity fampiasa ity ho mamela ny fampielezana “votoaty vetaveta sy tsy alehany” ary nahazo fisedrana mahamay tany amin'ny firenena maro. Fanadihadiana iray nataon'ny BBC no nahitana fa tsy tontosan'ny orinasa ny nampiato ireo kaontin'olona mandeha hafatra vetaveta sy mandrahona olona mbola kely hatramin'ny sivy taona. Voafariparitra ao koa fa tany lonaka ho an'ny vetaveta atao amin-jaza izy io ary maro ireo mpisera no mamitaka ankizy amin'ny fampanantenana hanao vakansy.
Teo amin'ny resaka famonoan-tena, manaiky ny fitoriana fa mandrisika pôrnôgrafia sy manimba ny kolontsaina indiana ny minisitry ny Teknolojia ao Tamil Nadu, M Manikandan, tany am-piandohan'ny taona tany. Saingy maro ny mpisera milaza fa misy fiantraikany miiba eo amin'ny fahalalaham-pitenenana ny didy.
Nanoratra i Apar Gupta avy ao amin'ny Internet Freedom Foundation:
Mety hisy ireo zava-manimba tahaka ny fampijaliana olon-kely an-tserasera, vetaveta amin-jaza, fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny adolantsento ary fandratrana eo amin'ny fiainana an-takonana izay ilaina fiheverana. Saingy miantraika any amin'ny fahalalaham-pitenenana, zo hivory, hiala voly sns ny fandraràna ny fampiasa. Ka tsy tokony hanao izany ny governemanta ary hihevitra ny fandratràna ao amin'ny andiam-politika fanaovan-dalàna.
Efa nohazavaiko hoe nahoana ny didy fandraràn'ny fitsarana ambony ao Madras ny Tiktok no mampanahy tamin'ny nivoahany tamin'ny voalohany.
Amin-kitsim-po, tsapako fa tsy tontosan'ny Fitsarana ny fanandratana ny zo ao amin'ny lalampanorenena hisian'ny fahalalahana miteny eto.
Manosoka izany ny Software Freedom Law Centre ao New Delhi, tamin'ny fanamarihana fa “manitsakitsaka ny zo fototra fahalalaham-pitenenana izay ampamirapiratin'ny andininy 19(1)(a) amin'ny Lalampanorenan'i India” ny didim-pitsarana. Antsoiny ihany koa ny fandraràna ny media miaraka aminy ho “ohatra mahazatra amin'ny fiandohan-tsivana ataon'ny rafi-pitsarana.”
Tamin'ny fanehoany ny ahiahiny momba ny fandraràna, nasongadin'ny vavahadim-baovao feminista SheThePeople ireo vehivavy vitsivitsy mpisera TikTok nahazo laza tamin'ny fampiasana ny fampihatra.
Amin'ny fahalalàna ny fahatrarana aoriana an'i Shina eo amin'ny fandraketana ny zon'olombelona sy ny fameperana ny fahalalaham-pitenenana, tsikerain'ny mpisera hafa ny fangatahan'ny orinasa hanafoanan'ny fitsarana tampony ao India ny fandraràna.
Tahaka ny itorian'i Huawei ny governemantan'i Etazonia ao amin'ny fitsarana amerikana, lazain'ny orinasa shinoa tompon'ny Tiktok koa ny Fitsarana Tampony ao India fa handratra ny zo halalaka hiteny, tafiditra amin'izany ny “fanaronana ny zon'ny indiana” fandraràna ny fampihatra. Lasa “olana manana habe mitovy amin'i Huawei” i Tiktok
Hanao ahoana fiantraikan'ny fandraràna ny TikTok eo amin'ny sehatra manerantany?
Iray amin'ireo sehatra nahazo mpisera haingana indrindra eto amin'izao tontolo izao ny TikTok, fantatra teo aloha ho Musical.ly, amin'ny fananana mpisera miisa 500 tapitrisa amin'ny ankapobeny. Inty ny tatitra asehon'i Statista momba ny mpiseran'ny TikTok :
Any amin'ny maharary no nahavoazan'ny fandrarana ny TikTok ao India. Fanazavana an-tsary avy amin'ny Statista sy ny Priori Data. CC BY-SA.
Eva Short manoratra ao amin'ny Silicon Republic:
Avy amin'ireo andian-kintan'ny media sosialy novokariny, izay manana mpanjohy mihoatra noho i Ariana Grande ny sasany amin'izy ireny no tena nampisavoana ambony dia ambony ny fitomboany ary maro amin'ireo mpanjohy ireo no tsy ampy taona, mbola kely. Hany ka misy ny fotoana tamin'ny taona 2018 nihoatra noho i Facebook, Instagram, Youtube ary Snapchat izy amin'ny isan'ny nitroka azy.
Ho an'ny sehatra, ity no fihemorana nitranga farany indrindra taorian'ny nandraràna azy tao Bangladesh sy ny nandoavany onitra goavana indrindra hatramin'izay tamin'ny raharaham-pitsarana iray tao Etazonia noho ny nanangonany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny lahatahirin'ny ankizy. Nanaiky izy ny handoa 5,7 tapitrisa dôlara sy hametraka fepetra vaovao hiarovana ny kilonga.
Raha eo am-piandrasana ny fotom-pitsarana manaraka hotontosaina ao amin'ny Fitsarana Ambony ao Madras amin'ny 24 avrily 2019 (rahampitso) ireo mpisera Tik Tok, ireo mpanandratenin'ny fahalalahana aterineto ary ireo miantraika aminy ny fandraràna, dia asongadin'ny adihevitra iray manontolo kosa ny filàna resaka ampahibemaso bebe kokoa momba ny lalàna an-tsibera sy ny fahasarotan'ny lohahevitra momba ny fahalalahana an'aterineto.